Xildhibaan Geelle “Waxaan ka hortagnay shir ka dhan ah MD Xaaf oo ka furmay Caabud-waaq” – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle oo katirsan Xubnaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in ay ka hortagayn Shir looga soo horjeeday Maamulka Galmudug oo ka furmay magaalada Caabud-waaq ee Gobolka Galgaduud. Xildhibaan Geelle ayaa sheegay in Shirkaan laga soo abaabulay magaalada Muqdisho ujeedadana ay aheyd in lagu curyaamiyo Madaxweyne Xaaf.
“Waxaan ka hortagnay shir Shalay magaalada Caabud-waaq ka furmay oo looga soo horjeeday Maamulka Galmudug waxaana laga soo abaabulay magaalada Muqdisho” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle. “Wasiiro hore iyo siyaasiin ayaa shirka ka furay Caabud-waaq waxaana is hor-taagay Shacabka Caabud-waaq oo taageersan Maamulkooda”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle.
Maxamed Xasan Geelle ayaa sheegay in Dowladda dhexe ee Soomaaliya ay weerar ku aheyd Maamulka Galmudug tan iyo markii Madaxweyne loo doortay Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” Caqabado badanna uu maamulkaasi wajahayo oo kaga yimid dhinaca Dowladda Soomaaliya.
“DFS ayaa weerar ku ah Maamulkaan muddo fog, hada iyada ayaa abaabulaysa shirar ka dhan ah Galmudug, wax kasta oo is difaac ah waan sameynaynaa maxaa yeelay Maamulkaan Shacabka Galmudug ayuu u dhisan yahay”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Geelle oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.
Dhinaca kale Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle ayaa sheegay in doorashada Galmudug aysan hadda aheyn wararka tilmaamaya in billooyin kadib la qaban doono ay tahay weerar ka dhan ah Galmudug sida uu hadalka u dhigay. “Madaxweyne Xaaf afar sano ayaa u dooranay Madaxweyne waxaa u dhiman waqti dheere, dadka sheegaya in hada doorasho dhici doonto waa riyoonayaan”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle.
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa dhowaan warbaahinta u sheegay in Dowladda Soomaaliya ay diyaarineyso doorasho sanadkaan ka dhacda Galmudug, waqtiga Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle uu ku egyahay dhamaadka sanadkaan sida uu sheegay Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xaaf iyo Xubno katirsan Galmudug ayaa ka soo horjeestay doorashada ay sheegtay Dowladda Soomaaliya in dhowaan ay ka dhici doonto Galmudug. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay curyaamisay Maamulkiisa hadana ay dooneyso in ay dumiso sida uu hadalka u dhigay.